एभरेष्टको सपनाबाट एकाएक निस्किन्छु । हामीलाई ‘अल्टिच्युड सिकनेस’ होइन, उचाइ पार गर्ने उत्तेजना धेरै भएको छ । हामी एभरेष्ट र हिमालको उतापट्टि जोडिन आतुर मानिसका अभियानका सपना रेलमार्गले पूरा गर्ला कि त । तर एभरेष्ट एक प्रिय पर्वत हो, जहाँ विश्वभरिकै मानिस उनका सपनाका कुँडाकर्कट लगेर थुपारिन्छन् । यसलाई मर्यादा, माया र इज्जतले प्रयोग गरौं, बेथितिका योजनाले होइन । यसमा हाम्रै दायित्व ठूलो छ । प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ ०८:३८
चिकित्सा विज्ञानबारे सामान्य वा सतही जानकारी लिन गुगल गर्नु जायज होला । तर त्यसकै आधारमा चिकित्सा प्रयोगका तौरतरिका अवलम्बन गर्नु, इन्टरनेटकै निर्देशनमा चल्नुचाहिँ कति उपयुक्त हो ? यसलाई छुट्याउन सक्नुपर्छ ।
एउटा व्यक्तिले पूर्ण सक्षम चिकित्सक बन्न दशकौँ विषयगत गहन अध्ययन, तालिम, कठिन परीक्षाका खुड्किलाहरू पार गरेको हुन्छ । कार्यानुभव र प्रयोगको आवश्यकता पनि त्यतिकै पर्छ । चिकित्सा विज्ञानमा दिनानुदिन नयाँ–नयाँ आविष्कारहरू थपिँदै गएका छन् । नयाँ–नयाँ मानकहरू सिद्धान्तले परिलक्षित हुन्छ, नयाँ–नयाँ अनुसन्धान र प्रयोगबाट खारिएको हुन्छ । विज्ञान विकासको क्रमसँगै आ–आफ्नो विषयका विशेषज्ञ, चिकित्सक निर्देशित हुन्छन् ।
निम्न अवस्थामा चाहिँ नेटले सहयोगीकै भूमिका खेल्न सक्छ :
डा. नेपाल हाड–जोर्नी विशेषज्ञ हुन् भने मैनाली सञ्चारकर्ता ।